नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : हक्की भबिस्यबेत्ता ज्योतिस ओजराज उपाध्याय लोहनी अहिले अमेरिका भ्रमणमा !
हक्की भबिस्यबेत्ता ज्योतिस ओजराज उपाध्याय लोहनी अहिले अमेरिका भ्रमणमा !
हक्की भबिस्यबेत्ता ज्योतिस ओजराज उपाध्याय लोहनी अहिले अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्छ । क्यानाडा भ्रमण सकेर अमेरिका आउनुभएका वहाँ सँग तपाईं पनि भेट्न, ज्योतिस परमर्श लिन सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि वहाँको यो सेल फोनमा संपर्क गर्न सक्नुहुन्छ - 1- 682-702-9519